Martisoor: Prof. Maxamed Jaamac Salaad Takar (1944 – 8 Agosto ’17) iyo Waayihii Nolosha (dhegayso) – Radio Daljir
Martisoor: Prof. Maxamed Jaamac Salaad Takar (1944 – 8 Agosto ’17) iyo Waayihii Nolosha (dhegayso)
Agoosto 17, 2017 7:49 g 2
Barnaamijka Martisoor ee Radio Daljir todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa wareysi aan 6 sano kahor la yeeshay AU Datoor/Prof. Maxamed Jamac Salaad Takar oo horraantii bishan 8 Agosto 2017 ku geeriyooday dalka Talyaaniga. Marxuunka oo muddooyinkii dambe ka hawlgalayey magaalada Gaalkacyo ayaa kamid ahaa dhakhaatiirta farakutiriska ah ee Eebbe ku manaystay cilmiga iyo khibrad.
Waxaana tusaale kuugu filan inuu Dr. Maxamed Jama Salaad madax u ahaa guddi dhakhaatiir ah oo loo saaray markii uu shilka gaari ku dhaawacmay Madaxweynihii dawladdii kacaanka ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre sanaddkii 1986.
Taas ka sokowna Marxuun Takar waxa uu ahaa shiqsi si weyn uga qaybqaata arrimaha bulshada siiba dhanka caafimaadka iyo waxbarashada, wuxuuna bixin jiray adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah kuwaas oo ay bulshadu si joogto ah uga faa’iideysan jireen.
AU Datoor Maxamed Jaamac Salaad ayaa wareysigan oo aan bishii July ee snadkii 2011-kii aan kula yeeshay Garoowe waxa uu si durugsan ugu falanqaynaya arrimaha caafimaadka, waxbarashada, siyaasadda iyo arrimo kale.
MARTISOOR 73 Raadreeb 30 Wararka 24358
Qurbajoogta Puntland oo Taageeray Go’aanka Garab-istaagga Xulufada Sucuudiga (dhegayso)
aniga raage xasan ahaan warasigaan idaacada daljir waan ugamahad celinaayaa
iyadoo tariikhda prof maxamed jamac salaad baahinta aqoontisa waxbarashadiisa iyo aragtida fog ee ladamacsanaa wadankiisa waxaanse aad ugahelay aqoonta aanan ogan ee kuliyada kimikada iyo hiigsigii farsamo sidoo kale waxaan kahelay awooda ciidan io dawladaha labarbardhigaay 1977 kii dawlada somaliya masar io konur afrika waraysi xiiso badan misana tariikh aqoonyahan somaliyeed oo kudayasho mudan
Cadceed Sadeq Maxamed 4 years ago
Alahha ha u naxariisto takhtarka. takhtarka waxaan bartay markii lacag loo aruurinayay dhismaha Isbitaalka. Shakhsi aamin ah ayuu ahaa. Lacagta assaga iyo gudi uu ku jiro ayaan ku soo hagaajinay. Meeshii larabay ayuu takhtarka gaarsiiyay. Waxaan rajeynayaa inuu ka takay rag iyo gabdho asagoo kale uu tobabaray. Inaa lilaahi wa inaa ilahay raajucuun. Alaha ha u naxariisto marxuumka.